Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Onye ọchụnta ego China na Tonga na-akọ banyere ọnọdụ agwaetiti ahụ ugbu a
Onye ọchụnta ego China bụ Yu Hongtao nọ na Tonga. N'ajụjụ ọnụ ya na CGTN, o kwuru na uzuzu juru ebe niile n'agwaetiti ahụ ka ugwu mgbawa ahụ gbasasịrị.
Yu kwuru, "Ihe m hụrụ ugbu a bụ onye ọ bụla na-etinye aka na nnapụta ihe mberede na ọrụ enyemaka ọdachi." “Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eyi ihe mkpuchi. ntụ mgbawa ugwu dị n'okporo ụzọ n'ihi na ntụ ntụ ahụ were ọtụtụ awa. Ala jupụtara na ntụ, gụnyere ahịhịa na ụlọ ndị mmadụ.”
“Ụfọdụ ndị ọrụ afọ ofufo anọwo na-ehicha okporo ụzọ, ma ha abanyebeghị n’ime ọhịa. Ndị mmadụ ka na-ekpochasị okporo ụzọ,” ka o kwuru.
Banyere ọnọdụ obibi ndụ, gụnyere mmiri, ọkụ eletrik na nri dị na Tonga, ihe Yu alaghachibeghị n'ọdịdị ya, mana enweela ọganihu na mpaghara ụfọdụ.
O kwuru na eweghachitere ọkụ eletrik n'ọtụtụ mpaghara n'ime otu ụbọchị ka mgbawa ahụ kwụsịrị. Ọzọkwa, mgbe chi bọrọ, n'ụbọchị mgbawa ahụ, onye ọ bụla weghachiri ihe oriri.
O kwuru, sị: “Mụ onwe m kwakọbara mmiri na nri na mmiri ọzọ.
“Anyị nwere akụrụngwa zuru oke ebe a. Enweghị mmiri ọ bụla nwere karama n'ụlọ ahịa ugbu a, mana ihe ndị ọzọ ka dị."
Akwụkwọ nri adịghị ugbu a. Yu kwuru na enyi ya na-arụ ọrụ ugbo gwara ya na ndị bi n'agwaetiti ahụ agaghị enwe akwụkwọ nri ọhụrụ ihe karịrị otu ọnwa. Banyere mkpụrụ osisi, o kwuru, sị, “Ọ bụghị ọtụtụ ihe dị n'agwaetiti ahụ, ịmalite, naanị ụfọdụ watermelons. Ma ọbụna nke a adịla ụkọ ugbu a. "
"Echeghị m na ndụ alaghachila nke ọma," Yu gwara CGTN.
O kwuru na onye osote onye isi ala ekwupụtala ọnọdụ mberede, na ndị Tonga na-esonye na enyemaka enyemaka ọdachi ma na-ehichapụ ntụ mgbawa n'okporo ụzọ.
O kwuru, sị: "Ọ bụrụ na a sachabeghị ha, ha ga-efeghachi n'ikuku mgbe ụgbọ ala gafere, ha ga-adakwa n'elu ụlọ."
“Ịṅụ mmiri na Tonga na-abịa kpọmkwem site na mmiri ozuzo. Ezinụlọ ọ bụla nwere ihe e ji ewepụta mmiri ozuzo n’elu ụlọ ha, n’ihi ya, anyị kwesịrị ịhụ na e kpochachara ntụ niile.”
Ọzọ na: Tonga